Home Wararka Qabshada Doorashada Guddiga ee G/Waqooyi ee Berri waa Gef weyn oo uu...
Qabshada Doorashada Guddiga ee G/Waqooyi ee Berri waa Gef weyn oo uu RW Roble u Bareerayo.
Sida muuqata RW Rooble arrinta doorashada aqalka Sare ee G/Waqooyin waxaa uu ka leeyahay dan gaar aha waxaanu ku milam yahay doodda iyo is jiijidadka siyaasadeed ee ka dhaxeeya Farmajo oo uu si dedban u matalayo iyo Gudoomiye Cabdi Xaashi.
RW Rooble maxaa u diiday inuu sedexda uu ku darayo uu mid waliba kala tashado inay raalli ku yihiin una arkaan shkhsiyaad caddaalad fali kara. Muxuu ugu daray kuwa isla markiiba ka soo jeestay dhinaca Mahadi Yatakabaruu haddii uusan la qabain oo heshiiska iyo amarka Farmajo uusan sidaas ahayn? Haddise uu arkay inay sidaas sameeyeen muxuu uga saari waayey gudiga oo uu kuwa cusub oo ay labada dhinac isla ogol yihiin u keeni waayey? Ma reer waqooyiga ayaa laga waayey rag iyo haween caddalad fali kara?
RW Rooble caayda haka daayo caqliga dad Somaliyeed, haddii uu arrinkan xallin waayana sidee ayuu u xallinayaa golaha shacbiga oo ka ballaaran kana dhib badnaan doona. Haddiise uu rabo inuu dooran na dooransiiyo cidi aqbali meyso ee ha ogaado.
Mid ka mid mas’uuliyiintii sida quruxda badan uga shaqeeyey, haddana ah xildhibaan golaha shacbiga Xil. Cali Maxamed Cumar (Cali Balcad) kana mid ahaa shakhsiyaadka aadka isugu hawlay doorashadii aqalka sare ee G/Waqooyi 2016 ayaa waxaa uu bartiisa facebook ku qoray qoraal aad u qiimo badan oo u ku muujinayo dareenka uu arrintaan ka qabo.
Qoraalka oo dhameystiran halkaan ka akhriso.
“Somali waa in ay ku baraarugtaa garnaqsiga reer waqooyiga. Ilaalinta midnimada iyo wadajirka dadka waa masuuliyad qof walba oo Somali ah saaran. Gudoomiya Cabdi Xaashi waa astaan u taagan midnimada dalkeena, garnaqsigiisana waa in si dhab ah lagu looga jawaabo.
Dood xaq ah ayuu soo jeediyay oo u baahan xal, degdega iyo isku dayga in wax la boobo halaga joogo. Mushkilad aanan dalkan horay uga jirin yaanan la abuurin. Doorasho aanan heshiis lagu ahayn, natiijadeeda laguma heshiinayo. Dalkan xaalad soo kabasho ayuu ku jiraa, wuxuu u baahan yahay isku hayn, isqancin iyo dib u heshiisiin. Looma baahna hurin colaad cusub iyo isku day xukun boob ku yimaada.
Dhaxalkii xukunka militariga ayaanan wali Ka soo kaban. Somaliya badbaado degdeg ah ayay u baahan tahay.
2016 dalka doorasho heshiis lagu yahay ayaa ka dhacday, caqabadahan hortaagan Reer waqooyiga ma jirin. Doorashada SL waxaa maamulay 7 odayga oo ay raalli isaga yihiin reer waqooyiga.”
Haddaba miyaan la helin Karin 11 qof oo ay raalli isaga yihnn oo si caddaalad ah wax ugu maamula dadka reer waqooyiga? Waa gef iyo meel ka dhac in laga waayey dad xaq maamuli kara ee waxaa jira caqabado iyo dano gaar ah oo hortaagan arrinka. RW Rooble haddii uu xaqdoon yahay xaqa waa fudud yahay haddiisa uu rabo inuu u xagliyo Farmajo isaga ayaa ku baaba’aya Somaliyana way badbaadi mar waliba.